डा. भगवान कोईराला – #बेसार- कस्तो अचम्मको मसला - IAUA
डा. भगवान कोईराला – #बेसार- कस्तो अचम्मको मसला
ramkrishna October 24, 2017	डा. भगवान कोईराला – #बेसार- कस्तो अचम्मको मसला
पोहोर पिलोले सताउँदा एक जना अपरिचितले इमेलबाट सल्लाह दिएका थिए- बेसार खानुस्, बिसेक हुन्छ। उनले आफ्नै अनुभव पनि त्यसमा लेखेका थिए। सुरुमा त ठट्टा गरेका हुन् कि जस्तो लागेको थियो। तर पछि इन्टरनेटमा खोज्दा पनि त्यस्तै भेटियो। त्यो अघि मलाई बेसारको यस्तो असर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन।
वास्तवमा बेसार एउटा गजबको मसला रहेछ। बेसारमा एन्टी ब्याक्टेरियल पदार्थ हुने रहेछ। यो एउटा एउटा प्राकृतिक विष-निरोधक पनि रहेछ। यसको उपयोगितालाई बुझेर नै आजभोलि बेसारमा रहेको कर्कुमिन (curcumin) मिसिएका पेय पदार्थ (nutritional beverage) पश्चिमी बजारमा प्रशस्त पाइन्छन्। यसको प्रसिद्धी पश्चिमी मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। अमेरिकाको बिर्मिङघमस्थित युनिभर्सिटी अफ अलाबामाको डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेकोलोजी एन्ड टक्सीकोलोजीका असिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. जीवन प्रसाइँले माइसंसारका पाठकका लागि बेसारबारे एउटा ब्लग लेखेका छन्। आउनुस् पढौँ उनको यो बेसार ब्लग
अन्त्यमा, आउनुहोस् आजैबाट शुद्ध बेसार करिब १-२ चम्चा बिहान-बेलुकी दुध वा पानी संग लिऊँ, अनि रोग मुक्त होऊँ
Previous Previous post: अनार एक औषधि
Next Next post: जापानमा आँधीबाट पाँचको मृत्यु, यातायात व्यवस्था ठप्प